Q1aad: Nolosha iyo Aqoonta Goroyada | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Deegaankeenna January 1, 2016	0 1,963 Views
Muqdisho (Himilonews) – Shimbiraha hadda ifka ku nool midda ugu weyn. Waxaa laga helaa Afrikada hodanka ah iyo Bariga dhaw. Waxay leedahay sur dhuuban oo dheer iyo madax yar; lugo iyo bowdyo diiran oo mid waliba ku dhamaato laba suul~baalal yaryar oo ayan ku duulin aadse u qurux badan.
Goroyadu waa noole aan ku xuurtoon orodka badan. Saacado xiriira ayay ordaysaa iyadoo inna aan dareemin wax daal ah. Waana taas sababta dadka neefta qaba ay subaggeeda isugu baanshaan.
Roob hooray intaanay dhibcihiisu dhul-dhicin ayay dhasheeda dul fadhiisataa oo okorisaa~ sababtuna waa tallaabsiga ilma-aragtida ah oo ay ku karaarayso. Cagma-dhigis la’aanteeda badan iyo meyracsiga galabeed oo ay caan ku tahay ayaa ka dhigtay Goronyada mid u dagan colkeeda. Waana taas sababta loo yiri “dhaxal Goroyo Dhebedaa leh”.
Goroyadu, waxay ku dhaqantaa Bananka. Labkiisa waxaa loo yaqaan Haldhaa ama Goray. Dheddigiisana waxaa la yiraahdaa Goroyo-cawl, Booso ama Haldhurre.
Goroyadu waxay dhashaa Kaliisha. Dhasheedana waxaa loo yaqaaan Hal-garac. Halka meelaha qaarna dhasha yar-yarka ah ee Goroyada looga yaqaan Warriile. Halka ay dhasheeda dhigato oo ah meel cidla’ ahna, waxaa loo yaqaan Goofka. Midkoodba mar ayuu ku fadhiistaa, ka kalana daaq tagaa.
Goroyada intii markaa wada kacda, waxaa loo yaqaan Fil. Goroyadu way ilaalo dheer tahay oo meel fog ayey wax ka aragtaa. Inta markaa wada socta ee meel wada daaqaysa, waxaa loo yaqaan Gawar Goronyo.
F.G: Sheekooyinka qaar ee ku saabsan Goroyada ee laga soo xiganayo Buugga Duur-joogteenna waxaa asal ahaan markii hore lagu daabacay mareegta dharaaro.com–sanadkii 2013, halkaas oo uu ku qoray Al-Ustaad Boobe Yuusuf Ducaale. Isaguna, sida uu tilmaamay wuxuu xaq-dhowrkooda u tiiriyey AUN Abwaan Xabbad Ibraahim.
Dhebed–waa shimbir la sheego inay ka ciydo waxa dhici doona sida roob ama col; fiin; ama galow.
Previous: Sahan: Mustaqbalka Islaamka ayaa iska leh
Next: Nolosha Daanyeerka